धनी राष्ट्रको पाहुना आउँदा रातारात हुन सक्ने काम अरू समयमा किन हुन सक्दैन ? – संविधानविद आचार्य – ताजा समाचार
धनी राष्ट्रको पाहुना आउँदा रातारात हुन सक्ने काम अरू समयमा किन हुन सक्दैन ? – संविधानविद आचार्य
काठमाडौं । संविधान विद डा.भिमार्जुन आचार्यले वर्तमान केपि शर्मा ओलि नेतृत्वको सरकारले चिनिया राष्ट्रपति सिजिनपिङको भ्रमणलाई लिएर काठमान्डौमा भइरहेको विकास निर्माणको कामप्रति कटाक्ष गरेका छन। संविधानविद डा.भीमार्जुन आचार्यले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको स्वागतका लागि निर्माण गरिएको संरचनाबारे चासो राखेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा धनी राष्ट्रको पाहुना आउँदा राता रात हुन सक्ने काम अरू समयमा किन हुन सक्दैन् भनेर प्रश्न गरेका छन् । सरकारले धनी विदेशीका अगाडि हात खुट्टा नै पसार्ने शासक किन जनताका काम गर्न सक्दैनन् भनेर सोधेका छन् । उनले पाहुनाको स्वागत गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले देखाएको प्रवृत्ति भने गलत भएको बताएका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन् : ‘धनी राष्ट्रको पाहुना आउँदा रातारात हुन सक्ने काम अरू समयमा किन हुन सक्दैन? चाबहिल जोरपाटी सडक कै अवस्थालाई लिऊँ । कुन हालतमा त्यो सडक छ आज ? यो त सरासर जनतालाई नटेरेको कुरा हो। जनताप्रति कुनै जवाफदेहिता नरहने, जनतालाई टेर्नु पनि नपर्ने, जनतालाई आफ्ना कार्यकर्ता भन्दा फरक नदेख्ने तर विदेशी नामको जेसुकै चीज भएपनि उसका अगाडि हात खुट्टा नै पसार्ने शा’सक कसरी जनताका हुन सक्छन्? पाहुनाको सत्कारको प्रश्न होइन, त्यो गरौ। प्रश्न प्रवृत्तिको, आखिर कहिले सम्म यस्तो?’
प्रकाशित भएको : October 10th, 2019